EditShare ဖြင့် BP ၏မီဒီယာထုတ်လုပ်မှုကိုအားဖြည့်ပေးခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ကို BP EditShare နှင့်အတူ၎င်း၏မီဒီယာထုတ်လုပ်ရေးစတေဲ့
ကို BP EditShare နှင့်အတူ၎င်း၏မီဒီယာထုတ်လုပ်ရေးစတေဲ့
EditShare ကြွယ်ဝသောသမိုင်းရုပ်ရှင် archive ကိုထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်အလုပ်များထုတ်လုပ်မှုအချိန်ဇယားကိုထောက်ပံ့များအတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုထောက်ပံ့ပေး
Basingstoke, ဗြိတိန် - ဇန်နဝါရီ 15, 2019 - EditShare® အသိဉာဏ်စကေးထွက်သိုလှောင်မှုအတွက်နည်းပညာခေါင်းဆောင် AQC နှင့်မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းနည်းများ, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစွမ်းအင်အမှတ်တံဆိပ်ကို BP ကယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်, ထုတ်လုပ်ကော်မရှင်ကစီမံခန့်ခွဲဖို့ XStream EFS နဲစကေးထွက်သိုလှောင်မှုပလက်ဖောင်းနှင့် Flow မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနှင့်ကို BP ၏ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည် မီဒီယာစီမံကိန်းများကို -related ။
"ယင်း၏ 110 နှစ်သမိုင်းမှာတော့ကို BP 10,500 ရုပ်ရှင်, မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်, ကြော်ငြာအပေါင်းတို့နှင့်တကွကမ္ဘာတဝှမ်းပထဝီတည်နေရာ၏ကျယ်ပြန့ထုတ်လုပ်သည့်အကြောင်းအရာများတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားအကွာအဝေးကိုဖုံးအုပ်ထားကော်ပိုရေးရှင်းဗီဒီယိုများထက်ပိုမိုထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။ နှင့်မကြာသေးမီကသည်အထိနီးပါးအပေါငျးတို့သ၏ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေး ပြင်ပအရင်းအမြစ်များကိုအတူပြုလေ၏။ 2015-2016 တစ်ခုပြည်တွင်းရေး State-Of-The-Art ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်စီမံကိန်းလိုအပ်ချက်နှင့်အစာရှောင်ခြင်းတိုးတက်နေသောအကြောင်းအရာ catalog ကိုထောကျပံ့မယ်လို့ Post-ထုတ်လုပ်မှုဌာနကတည်ဆောက်ရန်ထွက်ထားကို BP ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ပြည်ပရေးရာအဖွဲ့ကခုနှစ်မှာ"စတီဗင် Croston, ကို BP များအတွက်အမြင်မီဒီယာ၏ဦးခေါင်းကဖော်ပြသည်။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့မူရင်းသိုလှောင်မှုနှင့်မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အ outgrew ။ ကျနော်တို့ကိုအပြည်တွင်းရေးအဖွဲ့များနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း dotted ပြင်ပမျှဝေသူနှစ်ဦးစလုံးကိုထောက်ပံ့နေတဲ့အရည်လုပ်ငန်းအသွားအလာခွင့်ပြုပါရန်အခန်းတစ်ခန်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှစ်မျိုးလုံးပေးလိမ့်မယ်လို့တစ်ဦးကိုအစားထိုးလိုတယျ။ EditShare ကျနော်တို့လိုအပ်သောမီဒီယာဗဟိုပြုပလက်ဖောင်းဖြစ်ဖို့သက်သေပြခဲ့သည်။ embedded ထုတ်လုပ်မှုကိရိယာများနှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာအလိုအလျောက်အတူကျနော်တို့ကို BP ရဲ့အလွန်ပြောင်းလဲနေသောထုတ်လုပ်မှုစီးဆင်းမှုဖြတ်ပြီးအများအပြားပြောင်းရွှေ့အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ကစားသမားများချိတ်ဆက်ရန်တတ်နိုင်ကြသည်။ "
In-အိမ်သူအိမ်သားထုတ်ခဲ့ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်လျှော့ဘတ်ဂျက်မှအဆိုပါအပြောင်းအရွေ့။ Croston "ဖြည့်စွက်ပြည်တွင်းရေးဘဏ်ဍာဖို့ပြောင်းရွှေ့၏ပိုက်ကွန်ရလဒ်သုညကျနော်တို့အောင်မြင်ရန်နိုင်စီမံကိန်းများ၏အရေအတွက်လျှော့ချရေးဒါမှမဟုတ်သူတို့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက်အရည်အသွေးနှင့်အတူဘတ်ဂျက်အပေါ်တစ်ဦး 40% ငွေစုခဲ့။ "ဒီကို BP-TV ကိုအသင်းကို BP အတွင်းပိုင်းနှင့်ပြင်ပပုံနှိပ်ထုတ်ဝေတစ်နှစ်လျှင် 80 ရုပ်ရှင်န်းကျင်ထုတ်လုပ်သည်။
အဆိုပါ EditShare XStream EFS နဲ, Flow များနှင့် Airflow ကို BP ကို ​​BP စနစ်များကိုချိတ်ဆက်နှင့်ဝေးလံခေါင်သီဘဏ်ဍာကိုထောက်ပံ့သောပြည့်စုံသောမီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု tools များနှင့်အတူအဆင့်မြင့်မြင့်, အမှားဒဏ်ခံ shared သိုလှောင်မှုအခြေခံအဆောက်အအုံသည်။ မီဒီယာများအတွက်ထိန်းချုပ်မှုအလွှာအဖြစ်အမှုဆောင်ခြင်း, Flow အကြောင်းအရာ, ရှာ retrieve နှင့်စုဝေးဖို့ tools တွေအဖြစ်ကို BP အကြောင်းအရာ archive ကိုရန်နှင့်ကနေရွှေ့ပြောင်းအပါအဝင် Automate ဖြစ်စဉ်များနှင့်အတူပြန်ဖွင်မှဖမ်းယူကနေအားလုံးပိုင်ဆိုင်မှုများကိုခြေရာခံ။ အဆိုပါ XStream EFS နဲ 300 စတိုးဆိုင်များနားမှာပေါက်သောမြက်ပင်, တိုးတက်မှုအတွက်အလုပ်နှင့်ဖြန့်ဖြူးဘို့ချောဘဏ်ဍာအပါအဝင် 8K resolution ကိုအားလုံးကို BP အကြောင်းအရာတက်။ metadata ကိုခြေရာခံနှင့်အတူ, ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအလွယ်တကူရှာဖွေပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းသို့မဟုတ်ပြင်ပမှထုတ်လုပ်မှုများအတွက် Flow သို့မဟုတ် Airflow မှတဆင့်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
ကထောက်ခံခဲ့သည့်အဆိုပါတပ်ဆင်ခြင်း, EditShare ပြန်လည်ရောင်းချသူများ gaselec.tv, ကို BP အဘို့အမျိုးစုံနာကျင်မှုရမှတ်များလျော့ကျ။ "ဒါကြောင့်သူတို့ကစီမံခန့်ခွဲဖို့လိုတယ်ဘဏ်ဍာ၏အကွာအဝေးမှကြွလာနှင့်ဤသူတို့၏အခြေခံအဆောက်အဦများနှင့်အတူကြီးမားဘက်စုံသုံးလိုအပ်ပါတယ်သည့်အခါကို BP စာအိတ်တွန်းအားပေးနေသည်"Tara Montford, မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ comments, EditShare။ "သူတို့ကမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်, အထူးနှုန်းများ, Animation နှင့်ကြော်ငြာထုတ်လုပ်ခြင်း, ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကျော်အသုံးပြုသူအလားအလာရာပေါင်းများစွာနှင့်အတူဤစီမံကိနျးစီမံခန့်ခွဲပုံပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်လိုအပ်လျက်ရှိသည်။ ဤသည်အဘယ်မှာရှိ EditShare ထွန်းလင်း; သငျသညျ, တစ်ပြိုင်နက်စီမံကိန်းများအဆုံးမဲ့ငွေပမာဏအနီးစီမံခန့်ခွဲသာအချို့စီမံကိန်းများကိုမှအသုံးပြုသူ access ကိုကန့်သတ်, သူတို့သည်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြသည်ရသောကွဲပြားခြားနားသောတည်းဖြတ်ရေး suite ကိုသို့အယ်ဒီတာများခြေလှမ်းရှိသည်နှင့်သူတို့ချွတ်ကျန်ရစ်တဲ့စီမံကိန်းကိုလက်ျာဘက်တက်ကောက်လို့ရပါတယ်။ transcoding ကို automation နှင့်အတူ, EditShare ဒါ့အပြင်ကို BP တစ်ထပ်ခိုးပုံစံဖန်တီးထုတ်လုပ်မှုကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများစံဖို့လမ်းကိုပေးတော်မူ၏။ ဒီပြင်းအား၏အကြောင်းအရာ volumes ကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းတဲ့အခါဒီအရေးကြီးသည်။ "
အသေးစိတ်အချက်အလက်ကို EditShare XStream EFS နဲ, Flow မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် Airflow, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.editshare.com.
EditShare Post-ထုတ်လုပ်မှု, TV နဲ့ရုပ်ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အဆုံးမှအဆုံးသို့လုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းနည်းများ, ကွန်ရက်ကိုမျှဝေရန်သိုလှောင်မှုနဲ့ tapeless အတွက်နည်းပညာခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သဲထုတ်ကုန်ထိရောက်မှုနှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာပူးပေါင်းလမ်းတိုင်းခြေလှမ်းတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။ ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံးသုံးပလက်ဖောင်းနေရာ (Windows / OS X ကို / Linux ကို) ပရော်ဖက်ရှင်နယ် Non-linear ဗီဒီယိုတည်းဖြတ် - သူတို့ကဗီဒီယိုရိုက်ခြင်းနှင့်ပလေးအောက်ကိုဆာဗာများ, high-performance ကို EFS နဲအလယ်ပိုင်းက Shared သိမ်းဆည်းခြင်း, AQC, သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် backup လုပ်ထား software ကို, မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် Lightworks ပါဝင်သည် လျှောက်လွှာ။
© 2019 EditShare LLC ။ All rights reserved ။ EditShare® တစ်ဦးမှတ်ပုံတင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပါသည် EditShare.
ဘော့ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော လှံ & Arrows က Ultra HD ဖိုရမ် 2019-01-15
ယခင်: ကို BP EditShare နှင့်အတူ၎င်း၏မီဒီယာထုတ်လုပ်ရေးစတေဲ့
နောက်တစ်ခု: ဂျပန်စျေးကွက်အတွက် Calrec ရဲ့ Brio အသံစက်များကြည့်ရှုဗိုလ်မှူးအောင်မြင်